Nezvedu | Mari yezvikamu Shaoxing Huawo Auto Parts Co., Ltd.
Mari yezvikamu Shaoxing Huawo Auto Parts Co., Ltd.
Isu taive nyanzvi bhizinesi rebhizinesi rinotungamira mukugadzira, kudhizaina nekuvandudza mota accessories. In2004, Huawo akatanga kugadzirwa kweTPO / TPE zvinhu, mateki emota, trunk mat, makapeti uye Car Sound Kuuraya Mat, nekuda kwekuti isu tine yedu mbishi zvinhu uye dhipatimendi rekuvandudza zvigadzirwa.
Mateki emota TPE / TPR ndiwo akanakisa pamusika, ndeyeEco-inoshamwaridzika, Anti-kutedzemuka, uye inopa kudzivirira kwese kwemamiriro ekunze, chengetedza mota yako kune tsvina, matope, munyu, mvura nesinou. Uye i100% tsika inokwana nemotokari yako, zvinoita kuti hupenyu huve nyore uye hwakachena.
Nemakore akati wandei ekumhanyisa-kumhanyisa kukura, isu tanga tavaka yayo yega zvigadzirwa zvigadzirwa uye yakakwana mhando manejimendi sisitimu uye yakaenzana murabhoritari. Iye zvino isu tinopa mateki emota uye Car Inzwi Inouraya Mat kuVolkswagen neToyota.
Sezvo bhizinesi redu nevatengi vakura, isu tine chishuwo chedu chekugadzira nekupa mhando dzemhando yepamusoro dzemotokari kumusika.
Tine muchina kubva pane izvo zvigadzirwa kusvika kune wekupedzisira chigadzirwa. Isu tinopa yehunyanzvi Sevhisi uye yakanakisa nguva yekuendesa kune vese vatengi.
Isu tichava newe kusimbisa hurefu-hushamwari hukama hwekudyidzana.